အမှတ်4ဆောင်းဦးရာသီ 2017 - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ်4ဆောင်းဦးရာသီ 2017
သူတို့ဆောင်းဦးရာသီကာလအတွင်းထိုအစိတျအပိုငျးဆိုအဖြစ် "ဒီညအတွက်တရားမျှတပုံဆွဲကြသည်" ။ ဒီတော့ဒီမှာ, ပူနွေးစိတ်ကူးများရန်သင့်အာရုံကိုလွှဲဖို့ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတိတ်ကာလလအနည်းငယ်၌အကြှနျုပျတို့၏လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပုံပြင်များနှင့်သတင်းပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ သင်ပေါ်မှာငါတို့အပတ်စဉ်သတင်းပစ္စည်းများအတွက်ရှိပြီးသားပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခဲ့ကြပေမည်အဖြစ်ကျနော်တို့ပြုသောအမှုဖွင့်အရာအားလုံးကိုမပါဝင်ကြပါပြီ က်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက် တွစ်တာ အစာကျွေးခြင်း။
မင်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်လိုလာတဲ့အခါမင်းလိုချင်တယ် Reward Foundation ရှိလူအားလုံးမှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှအဘို့အ RCGP အသိအမှတ်ပြု
ဂယ်ရီ Wilson ကများက Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်
“ ဆေးပညာနယ်ပယ်အသစ်” - RCGP ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးညီလာခံ
စုံတွဲများအဘို့လိင်ကုထုံးသင်တန်း - ဆက်ဆံရေးစကော့တလန်
Edinburgh Medico-Chirurgical Society (၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်သည်)
လိင်ကျန်းမာရေးတိုး (ခါးပန်း) သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း
Wonder တွေ့ကြုံရအဆိုပါ Coolidge Effect အတွက် Porn အပေါ်ယူလူငယ်ပြဇာတ်ရုံ Group မှ,
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု၏ဘာသာရပ်အပေါ်ထှထှေကေုများအတွက်ဆက်လက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး (CPD) ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအထွေထွေ Practitioner ၏တော်ဝင်ကောလိပ်တို့ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါရမ်းဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်အတွက်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်ကောလိပ်၏မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်များမှကိုတိုးချဲ့။
ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်တစ်ရက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ဤအကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို7CPD မှတ်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ပညာရှင်, သူနာပြုများနှင့်ကုသကြိုဆိုကြသည်။ ဆေးဝါးမကြာမီ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် over-the-counter ဆေးဝါးများရှာကြံလူတို့အားကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်ကိုကယ်နှုတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပင်ကြှနျုပျတို့လညျးသူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဇန်နဝါရီလအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပို့ဆောင် start ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတျအဘို့ကိုထုတ်ကြည့်ပါ။ သငျသညျထိုအတောအတွင်းအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များချင်ပါတယ်ဆိုလျှင်, ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ mary@rewardfoundation.org.
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့်
အဆိုပါ ဒုတိယစာစောင် ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်စုံစုံစာအုပ်၏ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn ကို ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့်ဆင့်ကဲသီအိုရီအရခိုင်မာစွာအမြစ်တွယ်သည်။ Wilson ၏ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သမျှနှင့်အလွန်ကိုက်ညီကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်။
ပါမောက္ခဖရက်ဒရစ် Toates, ပွင့်လင်းတက္ကသိုလ်, ရေးသားသူ ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အလုပ်လုပ်: ထူးခြားတဲ့တိုက်တွန်း.
2014 ခုနှစ်တွင်အခါ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ပထမဦးဆုံးအနိုင်နိုင်အများပြည်သူစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက် featured လူ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာအစားထိုးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ယင်းကျယ်ပြန့်ယဉ်ကျေးမှုတဖြည်းဖြည်းမျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်တစ်ခုသို့မဟုတ် VR နားကြပ်သို့ plugging လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကိုဖို့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ထောက်ပြသည်။ ဂရပ်ဖစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, ဝယ်လိုအားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါနှင့်ပုံအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးအတွက်, လူ့သာယာဝပြောရေးမှသိသိသာသာခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်။ လေးဆယ်လေ့လာမှုများယခုဆင်းရဲတဲ့သိမြင် function ကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကို porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ နှစ်ဆယ်သုံးလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal မှ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ လူတို့သညျ porn အသုံးပြုမှုဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြဿနာများအကဲဖြတ်ခံရကြောင့်ဤငါး causation အကြံပြုအပ်ပါသည်။
လူကြိုက်များသောထင်မြင်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အခြားသောမိသားစုအုပ်စုများကဲ့သို့မိသားစုဆရာဝန်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ဒီကွန်ဖရင့်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဆရာ ၀ န်တွေကပြောတာကအချို့သောအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအချို့သောလူနာများ၏မှန်ကန်သောမေးခွန်းများကိုမမေးကြခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး က porn ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဖွင့်ဟချက်များသည်“ ဆေးပညာနယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ ကျနော်တို့တင်ဆက်မှုကောင်းစွာကျဆင်းသွားနှင့်သူတို့၏လက်တွေ့အလေ့အကျင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ကျနော်တို့ဝမ်းသာခဲ့ကြသည်။ ဆရာဝန်များကပြောကြားရာတွင်၎င်းတို့သည်နောင်တွင်ထို ပိုမို၍ ခက်ခဲသောမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသည်။
ဒါကဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအပေါ်စကော့တလန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက် conference မှာအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ 17 နိုဝင်ဘာလအပေါ် Edinburgh အတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကလန်ဒန်မှတက်လာမယ့်အတူ RCGP ကစီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်ကိုအတွက် 40 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကျော်ရှိခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 မှာတော့အသင်း TRF အဆိုပါ4တက်ရောက်ခဲ့သည်th Israelသရေလအမျိုး၌အပြုအမူစွဲအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ။ ဒီပညာရေးကွန်ဖရင့်အင်တာနက်အပြာစာပေများ၏အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည်ကုထုံးပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသနပညာရှင်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသော့သုတေသနအားထိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများရရှိနိုင်စေရန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြုစုခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အပြုအမူစွဲပေါ်တွင် 4th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံမှာလိင်သုတေသနစာတမ်းများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတွဲ ၂၄၊ နံပါတ် ၃၊ ၂၀၁၇ တွင်ပုံနှိပ်။ ပါလိမ့်မည်။ အခမဲ့မိတ္တူများကိုတောင်းဆိုချက်အရရရှိနိုင်ပါသည် darryl@rewardfoundation.org.
ကျွန်ုပ်တို့၏စီအီးအို Mary Sharpe သည် Glasgow ရှိ Strathclyde တက္ကသိုလ်မှလူငယ်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုတရားမျှတမှုစင်တာ (CYCJ) ၏တွဲဖက်ဖြစ်လာသည်။ ငါတို့ဝမ်းသာတယ် မာရီက“ ဒီဆုဟာ The Reward Foundation ရဲ့သုတေသနနှင့်ကွင်းဆင်းလေ့လာချက်တွေကိုပြန့်ပွားစေပြီးစကော့တလန်ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မေရီသည် Glasgow တွင်မတ်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင်ကျင်းပမည့် CYCJ ပွဲ၌စကားပြောလိမ့်မည်: မီးခိုးရောင်ဆဲလ်များနှင့်အကျဉ်းထောင်ဆဲလ်: အားနည်းချက်လူငယ်များ၏ neurodevelopmental နှင့်သိမြင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အစည်းအဝေး.
အချို့စုံတွဲများညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်ကြောင့်အကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ မည်သို့ပင်လှုံ့ဆျောမှု, ပိုပိုပြီးစုံတွဲများပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစကော့တလန်မှာလိင်ကုသထံမှအကူအညီရှာကြသည်။ အန်း Chilton ရှိလေ့ကျင့်ရေး၏ဦးခေါင်းကိုအရ, 1990 ရဲ့ညစ်ညမ်းအတွက်အကြံပေးခြင်းဘို့အတွက်လာမယ့်စုံတွဲ၏ပတ်ပတ်လည် 10% များအတွက်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်သူမကြောင့် 70 ကျော်% များအတွက်ပြဿနာတစ်ခုကပြောပါတယ်။ Out-of ထိန်းချုပ်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိုးပွားလာအရေအတွက်ကွာရှင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာပြိုကွဲတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်ကိုးကားထားသည်။ သူမသည် "သူတို့ရငျးနှီးအကြောင်းကိုတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားပေမယ့်ဘာမျှမအကြောင်းကိုငါသိ၏။ " ဟုပြောသည်
ကုသနားလည်ကူညီခြင်းနှင့်အသစ်က porn-ပြည့်နှက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, TRF လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရကုသ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်များတွင်မှတချို့လေ့ကျင့်ရေးကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ လိင်ကုသနီးပါးသီးသန့်စိတ်ပညာအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ. ယနေ့တွင်မူအကျင့်စွဲကြောင့်ကိုကျောထောက်နောက်ခံမှ neuroscience သုတေသနတစ်ခုနားလည်မှုတစ်စုံတစ်ရာကြားဆက်ဆံရေးကုထုံးသင်တန်း၏တစ်ဦးလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အဓိကအသုံးပြုသူများသည်နေသောသူအထူးသဖြင့်လူတို့သညျ, porn သစ်အမျိုးအစားများမှတင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်နှင့်အဘယ်သူမျှမဖက်ကိုက်ညီနိုင်မဆွတဲ့အဆင့်ကိုလိုအပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုနားလည်ရန်အဘို့အဒါဟာကူညီပေးသည်။ ဒီ 'သည်းခံစိတ်' 'စွဲလမ်းတဲ့ဂန္အင်္ဂါရပ်အဖြစ်လူသိများသည်။
အမျိုးအနွယ်ကိုလုနီးပါးလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာကြှနျတျောတို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူမာရိသညျရှပ်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လိင်ရာဇဝတ်မှုရန်၎င်း၏လင့်များအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုပညာရှင်များမှတစ်ဦးတင်ပြချက်ပေးထားခဲ့သည်။ ပရိသတ်ကိုခုနှစ်တွင် SHAAP (အရက်ပြဿနာများအပေါ်စကော့တလန်ကနျြးမာရေးလှုပ်ရှားမှု) ၏တော်ဝင် Edinburgh ဆေးရုံနှင့်တည်ထောင်သူ၏အတိုင်ပင်ခံစိတ်ရောဂါဘရုစ် Ritson အငြိမ်းစားခဲ့သည်။ သူကညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်အပေါ်အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြားတူညီကြောင့်မိန်းမောတွေဝေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအချိန်တစ်ကာလအတွင်းပိုလျှံများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ, အထူးသဖြင့်လူငယ်များ၏နုဦးနှောက်ထဲမှာ, ဦးနှောက်နှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာပွနျလညျဖှဲ့စညျးနိုငျသောအားလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်သုတေသနနှင့်ညီမျှတွေကိုပြသသည့်အခါငယ်ရွယ် compulsive porn အသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်ကိုကင်းစွဲနှင့်အရက်သမား၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်တွေကိုတုန့်ပြန်ဖွင့််လင်းကြောင်းပြသသည်။
ကြောင်းဖြစ်ရပ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးမှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်ဘရုစ် Ritson ကြင်နာစွာ Edinburgh ရဲ့ 190 ၏အသျှင် Medico-Chirurgical Society ရဲ့အဖွင့်ဟောပြောပို့ချချက်ကိုကယ်နှုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်th အောက်တိုဘာလဒီနှစ်အတွက် session တစ်ခု။
သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဆိုထွန်းသစ်စဧရိယာ၌စိတ်ဝင်စားဒါဆရာဝန်များကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ချွန်ထက်အဆုံးမှာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ porn ပင် '' အလယ်အလတ် '' အသုံးပြုမှု (တစ်ပတ်ကိုသုံးနာရီ) ဦးနှောက်၏သော့ချက်ဒေသများရှိမီးခိုးရောင်ကိစ္စကျုံ့နိုင်မပြသသောစာတမ်းများအပါအဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ နုငယ်ရွယ်ဦးနှောက်အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းကခါးပန်းတစ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူမာရိသညျရှပ်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအမေရိကန်ကိုကျော်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးထံမှ Clinician, ပညာရှင်များနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ၏ကျယ်ပြန့အတူလယ်ပြင်၌နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်တစ်ဦးအပျြောအပါးပါပဲ။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့ Salt Lake City, Utah ရှိကြ၏။
ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်၏သားကောင်များဖို့တည်မြဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပေါ်သုတေသနပြုအကွောငျးပွောတဲ့သူပါမောက္ခ Warren Binford တူသောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စပီအပြင် (သူမ၏တွေ့မြင် TEDx ဟောပြောပွဲ), SASH ၏ဥက္က,္ဌဖြစ်သူတရားဝင်လေ့ကျင့်ထားသောစိတ်ပညာရှင် Mary Deitch အားသူမလိင်ကျူးလွန်သူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အတွေ့အကြုံအကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲနေတဲ့ဒေသခံလူငယ် Hunter Harrington (၁၇ နှစ်) ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူကထောင်ချောက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အခြားလူငယ်များရန်ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်တားဆီးဖို့သူတွေကိုအခြားသူများကိုကူညီဖို့ရန်သူ၏တာဝန်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ တည်းဖြတ်ထားသောအင်တာဗျူးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အချိန်တန်လျှင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
Wonder တွေ့ကြုံအတွက် Porn အပေါ်ယူလူငယ်ပြဇာတ်ရုံ Group မှ, အဆိုပါ Coolidge Effect
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှအဆိုပါ Coolidge Effect သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လူငယ်ပြဇာတ်ရုံအုပ်စု, Wonder တွေ့ကြုံရ၏စကော့တလန်တော်ဝင် Conservatoire နှင့်အတူတစ်လျှောက်ဂုဏ်ယူ Co-စပွန်ဆာဖြစ်ခဲ့သည်။ မြင် ဒီမှာ ဒါဟာပေါ်မှာငါတို့အစောပိုင်းကဇာတ်လမ်းသည်။